Caaqil Axmed Cali Madax: “Af Urur Dhinac Kasta Jileec iyo Kaladaadsanaan baa ka Jirtay” – Radio Daljir
Caaqil Axmed Cali Madax: “Af Urur Dhinac Kasta Jileec iyo Kaladaadsanaan baa ka Jirtay”
Juunyo 15, 2017 3:14 b 2
Caaqil Axmed Cali Madax oo ka mid ah cuqaasha deegaanka Af Urur ayaa Daljir uga waramay dhacdadii Af Urur ee dhawaan oo khasaare badani ka dhashay.
Caaqilka ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir ku dhaliilay maamulka Puntland jileec iyo kala daadsanaan dhanka xogta iyo ciidamada ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman.”
Qaraxyo Kadhacay Muqdisho Dhimashadu waa 11 iyo Ka Badan Xilli Rasaas Wali Dhacayso
ahmed abshir ali madax 3 years ago
buunbuunintu ma ficno dawladana wax wabad as looga fadhiyas
Geelle Yare 3 years ago
Alle ha u Naxariisto intii ku nafweyday weerarkaa. Waxaa xaqiiqo aan laga gaban ah in dowlad goboleedka puntland ay dayacday dadkeedii , xitaa iska dhaaf wax kalee in markii weerarku dhacay ninka lagu magacaabo Qarjab ee wasiirka amniga ah uu sheegay in aysan dowladda Puntland cidna uga dhimay dad maatoah oo deegaanka ah la laayay iyadoo wax walba ay iska cadyihiin. Tankale wafdiga la diray ee deegaanka loo diray si ay u soo ogaadaan xaaladda deegaanka ilamaha in ay wax soo kordhinayaan sheekadoodu waa igu sawir oo qura. Reer sanaag waa in ay ka tashtaan Puntland dulmiga ay ku hayso .